Depiote Lylyette René de Roland : “Ampiharo lalàna izay nahavanon-doza tany Antsakabary” | NewsMada
Depiote Lylyette René de Roland : “Ampiharo lalàna izay nahavanon-doza tany Antsakabary”
“Aoka hampiharana lalàna izay nahavanon-doza, fa malahelo ny vahoakan’Antsakabary”, hoy ny depiote Mapar, voafidy tany Befandriana Avaratra, Lylyette René de Roland, ny faran’ny herinandro teo, momba ny “Raharaha Antsakabary“ tsy hita be ihany izay tohiny sy farany.
Hita soritra fa ny ilany hatrany, ireo namono ny polisy roa lahy, no natao tsindrihazolena. Fa izay nandoro tanàna, tsy nisy inona nahazo azy ireo. Takiny ny hanohizana ny fanadihadiana momba ny “Raharaha Antsakabary“. Tokony hosamborina izay tena nahavanon-doza. Ny zavatra hitan’ny vahoaka any: tsy misy inona nahazo izay nandoro tanàna.
“Atao mizana tsindrina ila ny fampiharana ny lalàna. Ampiharo amin’izay namono olona sy nandoro tanàna ny lalàna”, hoy izy. Miandry ny valin’izay ny any Antsakabary. Tsy tokony hitanila na hanavakavahana olona ny fitsarana, fa hampiharina ho an’izay namotika ny tanànan’Antsakabary ny sazy mendrika an’izay.
Mbola eo ny “Raharaha Andriamandavy VII Riana“
Raha ampitahaina ny fanenjehana ny loholona Lylison René de Roland sy ny loholona Andriamandavy VII Riana: samy loholona sy olom-boafidy, nefa tsy mitovy ny fampiharana ny lalàna. “Aza mba atao mitanila ny fampiharana ny lalàna”, hoy izy.
Raha izany olom-boafidy izany, tokony hanana fomba fitondrana azy manokana. Ny zavatra hita maso sy amin’ny haino aman-jery: tsy nisy inona natao azy ny loholona Andriamandavy VII Riana, izay hita nitarika vahoaka nitora-bato ny biraom-panjakana.
Nisy naka na ny fitoriana momba azy izay tonga tany amin’ny zandarimaria aza. Tsy fantatra hoe iza no naka izany antontan-taratasy izany, tamin’ny fitoriana nataon’ny mpitsara.
Maninona no tsy mitovy ny fitondrana ny raharaha sy ny fitsarana amin’ny samy olom-boafidy? Hita fa mitongilana izany ny fampiharana ny lalàna.
“Tsotra ny tanjonay: mangataka, ataovy mitovy ny lalàna mifehy ireo olom-boafidy”, hoy ihany izy.
Izany no tany sy fanjakana tan-dalàna amin’ny mpitondra, mitsamboaboatra lava amin’ny hoe tsy misy ambonin’ny lalàna?